Shuruudaha mamulada Heer degmo iyo Gobol waxa kamida inuusan Heego soo maray. | ogaden24
Shuruudaha mamulada Heer degmo iyo Gobol waxa kamida inuusan Heego soo maray.
Mamulka cusub ee madaxwayne Mustaf oo ku Guda jira magacaabista masuuliyiinta mamulada Heer degmo iyo Gobol, ayaa shuruudaha lagu Qaadanayo shakhsiga xilalkaasi danaynaya waxaa safka Hore kaga Jira inuusan kamid noqon Ururkii Heego ee Cabdi iley sameeyay bilihii ugu dambeeyay.
Wasiirka madaxtoyada oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in shuruudahan cusub looga Goleeyahay in lahelo masuuliyiin u Qalanta xilka ay Qabanayaan, balse shuruudahani ayaa u muuqda Qorshe cusub oo lagu Fogaynayo Qaar-kamida Aqonyahanka deegaanka.
Shuruudaha uu wasiirka madaxtooyadu sheegay in lagu xidhayo muwaadinka damacu kaga Jiro Qabashada xililka Heer Gobol iyo degmo ayuu kusheegay.
1- Waa inuu Haystaa shahaadada Heerka 1-aad ee Jaamacada
2- Waa inuu leeyahay Khibrad iyo Waayo Aragnimo shaqo
3- Waa inuusan kasoo mid noqon kooxihii musuqa iyo Fawdada sida ( HEEGO)
Tan iyo intii uu meesha kabaxay mamulka Kooxdii Cabdi iley ayaa waxaa kabilawday magalada Jigjiga in beel Gaar ah lagu shabadeeyo Kooxdii Heego oo ahayd dhalinyaro si daba kariix ah laysugu Keeni jiray, kuwaasi oo dhamaan Gobolada wadanka kasoo kala Jeeday ama laga sameeyay.
Shuruudahani cusub ee Heegada aan Jirin lagu darayna waxaa muuqata inay Qayb katahay dagaalka siyaasadeed ee sida Goonida ah loogu bar-tilmaameedsanayo dhalinyarada iyo Aqonyahanka deegaanka Qaarkood, taasi oo hadii aanu madaxwayne Mustaf Talaabo deg dega kaqaadin dhalin karta cawaaqib xumo Hor leh.